Hordhac: Leicester City Vs Manchester United ee Horyaalka Premier League, Kulanka ugu Adag Horyaalka, Liiska Xidigaha Maqan | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Hordhac: Leicester City Vs Manchester United ee Horyaalka Premier League, Kulanka ugu...
Manchester United ayaa dooneysa inay ku soo laabato wadooyinkii guulaha ee Premier League marka ay booqaneyso King Power Stadium si ay ula dheesho Leicester City oo aan isku dheelitirneyn.
Red Devils ayaa haatan ku jirta kaalinta afaraad ee kala sarreynta , iyadoo leh 14 dhibcood oo ay muujinayaan toddobadii kulan ee furitaanka xilli ciyaareedka, halka Leicester ay fadhiso kaalinta 13 -aad, iyadoo ka heshay siddeed dhibcood oo keliya toddoba kulan oo ay ciyaartay xilli ciyaareedkan.
Manchester United: Marcus Rashford ayaa ciyaaraya kulankii ugu horeeyay mudo kadib. Amad Diallo ayaa isna kasoo kabsaday dhaawac uu ku maqnaa.
Raphael Varane ayaa laga yaabaa inuusan mar kale ciyaarin bishaan ka dib dhibaato gumaarka ah oo ka soo gaartay France horaantii isbuucaan.
Iyada oo Harry Maguire uu qarka u saaran yahay inuu mar kale seego, Eric Bailly iyo Victor Lindelof ayaa qarka u saaran inay si wada jir ah ugu soo bilowdaan tan iyo bishii Febraayo.
Fred iyo Edinson Cavani ayay u badan tahay inaan la heli doonin sababtuna tahay inay ka soo laabtaan waajibaadka caalamiga ah.
Liecester City: Ciyaaryahanka khadka dhexe ee muhiimka ah Wilfred Ndidi ayaa seegi doona inta ka dhiman bishaan dhaawac bowdada ah oo soo gaaray ka hor Fasixi. Hamza Choudhury wuxuu rajaynayaa inuu booskiisa sii haysto.
Jonny Evans ma awoodin inuu u ciyaaro Waqooyiga Ireland intii lagu jiray nasashada Jannik Vestergaard ayaa sidoo kale wajahaya tijaabo jirdhis oo soo daahay.
James Justin ma uusan soo laabanin laakiin Wesley Fofana ayaa weli ka maqan kooxda Foxes. Ricardo Pereira iyo Timothy Castagne ayaa tartan ugu jira inay ku soo bilaabaan daafaca midig.
James Maddison ayaa ka baxay booskiisa isbuucyadii la soo dhaafay waxaana laga yaabaa inuu fariisto kursiga keydka kulanka Manchester United.
Leicester ayaa badisay kulankeedii ugu dambeeyay ee horyaalka oo ay la ciyaareen Manchester United 2-1 bishii May-ma aysan badinin kulamada horyaalka oo xiriir ah Red Devils tan iyo bishii September 1973.
Manchester United ayaa laga badiyay kaliya hal kulan oo ka mid ah 15-kii kulan ee ay Premier League kula ciyaartay Leicester (9-guul iyo 5-barbaro), iyadoo hoos u dhacday 5-3 bishii September 2014 xilligaas oo uu maamulayay Louis van Gaal. Si kastaba ha ahaatee, waxay guuldarro 3-1 ah kala kulmeen King Power Stadium FA Cup xilli ciyaareedkii hore.
Leicester ayaa isha ku heysa inay guul gaarto seddex kulan oo xiriir ah Manchester United tartamada oo dhan markii ugu horeysay tan iyo bishii November 1901.
Saacada (17:00pm Somalia) (16:00pm Yurub)
Garoonka Vicarage Road Stadium
Previous articleHordhac: Watford Vs Liverpool ee Horyaalka Premier League, Diogo Jota iyo Xidigaha kale ee Maqan
Next articleHordhac: Manchester City Vs Burnley ee Horyaalka Premier League, Ferran Torres oo ka Maqan City, Shaxda Labada Koox
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso in ay sahamiso suurtogalnimada ay kula soo saxiixan karto xiddiga khadka dhexe uga ciyaarakooxda...
Kaalin intee le’eg ayuu R/W ROOBLE ku lahaa go’aanka laga gaaray...